nagindra shahi – Karnalisandesh
Tag: nagindra shahi
कालिकोट। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कालिकोटका अध्यक्ष नगिन्द्र शाही ‘नेसनल’ ले एमालेबाट चुनाव जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गर्नेहरुले राजनीतिक अपराध गरेको आराेप लगाएका छन्। आइतबार नेकपा एमाले शान्नि त्रिवेणी गाउँपालिले आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा बाेल्दै अध्यक्ष शाहीले उक्त आराेप लगाएका हुन्। अध्यक्ष शाहीले पार्टी एमाले, चुनाव चिन्ह सूर्य, विचार जबज मान्नेहरुले अहिले आएर एमालेकै विरूद्
सुर्खेत। नेकपा एमाले कालिकोटका अध्यक्ष नगिन्द्र शाही ‘नेसनल’ ले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरा मनासिव भए पनि समय अघि बढि सकेको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत एमालेका ९ जना नेताहरुले जारी राखेको प्रयासतर्फ इंगित गर्दै अध्यक्ष शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘१० बुदें प्रस्ताव कार्यनयन गरौ भन्ने कुरा मुनासिव छ। जुन प्रस्ताव स्थानीय तहमा कार्यनयन हुदै गइरहेको
ओली पक्षद्वारा काठमाडौँ-कालिकोट सम्पर्क मञ्चको पुनर्गठन
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केपी शर्मा ओली) पक्षले कालिकोट-काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको पुनर्गठन गरेको छ। काठमाडौँ-कालिकोट सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित ‘अगुवा कार्यकर्ता भेला’ ले पुनर्गठित मञ्चको अध्यक्षमा विनोद शाहीलाइ चयन गरेकाे छ। यसअघि कालिकोट-काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षमा चित्र हमाल थिए। मंगलबार राजधानीको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रममा शाहीको नेतृत्वमा ५१ सदस्सीय कमिटी गठन ग
गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति नयाँ जनादेशमा जाउँ: नेता शाही
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ओली) पक्षका नेता नगिन्द्र शाही (नेसनल) ले नयाँ जनादेशमा जाने कुरा कसरी प्रतिगामी हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत नेता शाहीले नयाँ जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगामी हो भन्नेहरू वास्तविकता के हो ? भन्ने बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्। नेता शाहीले लेखेका छन्, ‘नयाँ जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगामी हो भन्ने मित्रहरू कृपया पढ्
कार्यकर्तालाई धैर्य रहन नेता शाहीको अनुरोध
कालिकोट। नेकपा (नेकपा) ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य नगिन्द्र शाही (नेशनल) ले स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई धैर्य रहन अनुरोध गरेका छन्। पार्टी विभाजनको गहिरो चोटसँगै गाउँमा पुगेका नेताहरुले स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताहरुलाई आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन्। यसै क्रममा गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका नेता शाहीले स्थानीय कार्यकर्तालाई धैर्य रहन र नआत्तिन आग्रह गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
कालिकोट। नेकपा 'ओली' समुहका केन्द्रीय सदस्य नगिन्द्र शाही 'नेशनल' ले कालिकोटवासीलाई कुनै भडकावमा नलाग्न अनुरोध गरेका छन्। बुधबार शाहीले सामाजिक सन्जाल फेशबुकमार्फत सरकारले घोषणा गरेको आवधिक निर्वाचनमा केन्द्रित हुनसमेत अनुरोध गरेका छन्। उनले आफ्नो स्टाटसमा भनेका छन्, ‘आदरणीय कालिकोटवासी दाजुभाई दिदिबहिनी, तत्कालीन दुई पार्टी नेकपा एमाले र माकेको एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा'
नेकपाका नेता शाहीको ४०औं जन्मोत्सवमा बिरामीलाई फलफूल वितरण
कालिकोट। नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) कालिकोटका सचिव नगेन्द्र शाही (नेश्नल) ले आफ्नो ४०औं जन्मोत्सवका अवसरमा बिरामीहरुलाई फलफूल वितरणसँगै स्वास्थलाभको कामना गरेका छन्। नेता शाहीले शुक्रबार आफ्नो ४०औं जन्मोत्सवको अवसरमा जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा रहेका करिब दुई दर्जन बिरामीहरुलाई फलफूल प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका हुन्। नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता शाहीले
(नेकपा) कालिकोटको आगामी चैत ४ गते वैठक बस्ने
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी कालिकोटको वैठक आगामी चैत ४ गते बस्ने भएको छ। यसअघि विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाईरसको जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर फागुन २२ र २३ गतेका लागि तय गरेको जिल्ला कमिटीको वैठक स्थगित गरिएको थियो। नेकपा कालिकोटका सचिव नगिन्द्र शाही ‘नेसनल’ का अनुसार उक्त स्थगित गरिएको जिल्ला कमिटी वैठक आगामी चैत ४ गते बस्नेछ। उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुक म
कोरोनाभाइरसलाई दृष्टिगत गर्दै वैठक स्थगित गरेका छौं: सचिव शाही
कालिकोट। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी कालिकोटले यही फागुन २२ र २३ गतेका लागि तय गरेको जिल्ला कमिटीको वैठक स्थगित गरेको छ। नेकपा कालिकोटका सचिव नगिन्द्र शाही ‘नेसनल’ का अनुसार कोरोनाभाइसरको संक्रमण र उक्त महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै जिल्ला कमिटीको वैठक स्थगित गरिएको हो। सरकारले ठूला सभा समारोह, भोज भतेरलगायतका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न आह्वान गरेकाले वैठक स्थगित गर्नु परेको नेता शाही